विशेष Archives - Page2of 161 - Bigul News
उच्चस्तरीय टोली लिएर किन गए कुलमान घिसिङ नयाँ दिल्ली …..
काठमाडौँ । विद्युत् खरिद सम्झौता नविकरण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतको उच्चस्तरीय टोली आज भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले यही पुस …
अन्तत: अाेली र प्रचण्डबीच अाज छलफल हुन सकेन, किन स्थगित भयाे ”वान टु वान वार्ता”
काठमाडाैँ । बहुप्रतिक्षित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच अाज हुने भनिएकाे प्रत्यक्ष भेटघाट र वार्ता नहुने भएको छ। पाँच दिनपछि काठमाडौं आईपुगेका …
एमालेसँग पार्टी एकता गर्न खाेज्दा माअाेवादी फुटाउने धम्की सहित प्रचण्डलार्इ यस्ताे पत्र
काठमाडाैँ । नेकपा एमालेसँग पार्टी एकताकाे विषयलाई लिएर माअाेवादी केन्द्र फुटकाे खतरामा परेकाे छ । बाम पार्टी एकताकाे विषयले असन्तुष्ट बनेका माओवादी केन्द्रका नेताहरुले अाज गोपाल किरातीको नेतृत्वमा ‘आठौं महाधिवेशन …
चुनावी समीक्षा गर्न आज राजपा अध्यक्षमण्डलको बैठक
काठमाडौं । चुनावी समीक्षा गर्न राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको अध्यक्षमण्डलको बैठक मंगलबार बस्दैछ। पार्टी कार्यालय बबरमहलमा बस्ने बैठकमा चुनावी समीक्षा, संघ र प्रदेश सरकार गठन लगायतका विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ। …
एका बिहानै काठमाडाैँकाे मैतिदेबीमा भयानक बस दुर्घटना
काठमाडौँ । काठमाडौँको मैतीदेवीमा मंगलबार बिहानै बस दुर्घटना भएकाे छ । गौशलाबाट रत्नपार्क जाँदै गरेको सिटी यातायातकाे बा २ ख ८७३३ नम्बरको बस बिजुलीको पोलमा यात्रुबाहक बस ठोक्किएर दुर्घटना हुँदा …
यी प्रदेशमा नबन्ने भयाे एमालेबिना सरकार, कुन प्रदेशमा कसको सरकार ? यस्तो छ प्रदेश सत्ता समीकरण
युव मगर काठमाडाैँ । हालै सम्पन्न अाम निर्वाचनपछि मूलुकले अब राजनीतिक काेल्टे फेरेकाे छ । देश संघीय शासन व्यवस्थामा गएपछि पहिलाे पटक भएको याे चुनावपछि मुलुकमा प्रदेश सरकार पनि गठन …
विगुल न्यूज । मध्यललितपुरकोे सुन्दर ग्रामिण बस्ती लेले आन्तरिक पर्यटकले रुचाएको गन्तव्य हो । बर्षा याममा हरियाली छाउने यहाँका बस्तीहरुमा हिउँदको तुसारोले गाउ नै सेताम्मे देखिन्छ भने मंसिर नलाग्दै हुस्सुको घुम्टोमा …
प्रदेशसभाको समानुपातिक सिट बाँडफाँड सार्वजनिक: कुन दलको भागमा कति सीट पाए ? (हेर्नुस् सूची)
युव मगर काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशसभातर्फ समानुपातिक निर्वाचनमा नेकपा एमाले पहिलो पार्टी बनेको छ । निर्वाचन आयोगले शुक्रबार अपराह्न सार्वजनिक गरेको नतिजामा दुई …
प्रदेश नम्बर ५ काे राजधानी कहाँ ‘बुटवल’ की ‘दाङ’ यस्ताे छ अङ्कगणित
युव मगर काठमाडाैँ । नयाँ संघीय संरचनाअनुसारकाे अामनिर्वाचन सकिए लगत्तै प्रदेश राजधानकाे विषयलार्इ लिएर चर्काे बहस शुरू भएकाे छ । ठाउँठाउँमा नागरिक स्तरबाट नै दबाब मूलक अान्दाेलन शुरू भैसकेकाे छ …
भारतीय प्रधानमन्त्री माेदीले देउवा अाेली र प्रचण्डलार्इ किन गरे टेलिफाेन
नयाँ सरकार बन्न लागेकाे र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रक्रियामा दलहरूबीच कुरा बाझिरहेका बेला माेदीले फाेन गर्नुलार्इ अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएकाे छ ।